Ndakavigwa sei neDigg (Mhosva Yangu) | Martech Zone
Kune avo imi makagara muchiverenga blog yangu, munoziva kuti ini ndinoedza… zvakanyanya! Zvichida zvakawandisa! Kwayedza svondo rino Ini ndakasaina kune Mushandisi Submitter. Ibasa rakaonekwa mu ichangobva Wired chinyorwa apo munyori wenyaya akabhadhara kuti awane Diggs on Digg.com.
Heano mashandiro ayo ... mumwe munhu anobhadhara User Submitter uye ivo vopatsanura mari nevashandisi veDigg, avo vanozo chera nyaya yacho Iyo sisitimu yakanyatso kuomarara kukuudza iwe chokwadi. Iwe unogashira yakasarudzika feed URL iyo inokuudza iwe kuti ndeapi nyaya kune Digg. Iwe ipapo digg Nyaya. Iwe unobva watodzoka zvakare muMushandisi Submitter kuti utaure izvo iwe dugg Nyaya. Mushure meizvozvo, yako digg iri 'yakasimbiswa'. Ini handizive izvo zvinoumbwa, asi zvirokwazvo hazvisi zvoga.
Ini ndinofungidzira vanoshanda veMushandisi Submitter vanofanirwa kuve vanongwarira nezve maitiro avanoenda nezvebhizinesi ravo. Kana ivo vachigara vachikwenya Digg yezvinyorwa, ndine chokwadi Digg ichave iri kwavari nekukurumidza. Kana iwe uri mushandisi Submitter mushandisi, ini ndinogona kupupura kuti ivo vari kwauri kwauri nekukurumidza zvikuru!
Basa rangu neMushandisi Submitter zviri pamutemo nhasi. Ndakagamuchira meseji inotevera pandakaedza kupinda muDigg.com:
Uye chii chaive muhoro wangu muhombe?
Ini ndinonyara kubvuma kuti ndakagadzira $ 0.50 huru ndisati ndavigwa zvakanyanya naDigg. Chaizvoizvo, hapana chandakaita nekuti ini pamwe handina nzira yekutora iyo $ 0.50 kubva kune Mushandisi Submitter.
Saka chii chandakadzidza? Digg inogona kushungurudzwa here? Chokwadi, asi ivo ndivo kutarisa nekuvandudza kugona kwavo kukanganisa nyaya idzi. Anoshandisa Wemutariri anotumira here? Ndiri kufungidzira kuti pamwe vari kutora Digger dzakaraswa kuruboshwe uye kurudyi… uye vachifamba vachienda nemindi. Mushure mekuyedza neMushandisi Submitter, kuraira kwangu kwaizove ku gara kure. Ndiwo marwadzo muchiuno, kutambisa nguva uye hauna kukodzera masendi waunogona kana kuti waungatore.
Kunyanya kana iwe uchida Digg. Ini handisi fan hombe, asi ndine urombo kuti ndakawana bhuti.
Ndine urombo Digg! Ndine urombo Kevin, Owen, Nicole, Brian, Steve, Amar, Dan, Daniel, Eli, Jay, John, Mike, Ron, Scott, uye Timeless!
Pamwe iwe unogona kupa chiokomuhomwe kumusana kwako neiyo hafu yemari yawakagadzira ..
oh mira hauna kuzviwana zvakadaro .. damn man .. manje zvinorwadza lol
🙂 Ini ndaizofara kubhadhara makumi mashanu emasendi kudigg yaanofarira yaDigg!